Sceneries ziyafumaneka Rikoooo na wathi ngokuzenzekelayo, kukho isisombululo? (Win 7 / 8 +)
Le nkqubo isebenza kuzo zombini Prepar3D kunye FS2004.
Ngokungagqibekanga, FSX ifakwe kwi «C: \_ Iifayile yeNkqubo (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X». Ingxaki kukuba 7 Windows kunye 8 + okanye Windows 10 awuzukuba kulawulo epheleleyo iifayile ngaphakathi «Microsoft Flight Simulator X» sokuthintela inkqubo esuka yokubhala kwifayile yoqwalaselo. Ukuyisombulula ingxaki, yiya «C: \_ Iifayile yeNkqubo (x86) \_ Microsoft Games», ke benze ekunene nqakraza kwincwadi eneenkcukacha «Microsoft Flight Simulator X», nqakraza «Properties», ngoko phezu «Ukhuseleko» tab. Apha, khetha «Abasebenzisi (XXXXXX)», uze uklikhe ku «Guqula». Kwi window kuvulwa nje, khetha kwakhona «Abasebenzisi (XXXXXX)», nqakraza kwi «ulawulo Full», ngoko «Uguqulo». Ngoku, ukuba unayo nje unqakraze ku «OK» kunye Windows kuyihlaziya iimvume.
Imiyalelo ngemifanekiso ngezantsi: